Tag: maonero | Martech Zone
AutoPitch: Email Otomatiki yeVamiriri veKutengesa Ekuvandudza
China, April 12, 2018 Svondo, Kubvumbi 15, 2018 Douglas Karr
Pane nguva zhinji apo vamiririri vekutengesa vane runyorwa rukuru, asi kuedza kunodiwa kutumira email imwe panguva kunotora kuyedza kukuru. AutoPitch inosangana yakanangana neemail yako, inogonesa templating, uyezve inodzosera kumashure kune chero chiitiko kana kubatirana zvine chekuita neaya maemail. Iwe unogona kunyange setup yakateedzana inotumira kune ako runyorwa. Kudhonza inotonhora inotungamira runyorwa mune yeemail chikuva kunogona kuwana kambani mune zvishoma zvishoma
Gong: Kukurukurirana Intelligence Platform yeMatengesi eTimu
China, December 14, 2017 Chitatu, October 28, 2020 Douglas Karr
Yekukurukurirana kweGong analytics injini inoongorora kutengesa mafoni kune ega uye akaenzana huwandu kuti ikubatsire kunzwisisa zviri kushanda (uye zvisiri). Gong inotanga neyakareruka khalendari yekubatanidza uko inoongorora yega yega yekutengesa reps 'khalendari ichitsvaga iri kuuya yekutengesa misangano, mafoni, kana mademo ekurekodha. Gong anobva ajoina yega yega yakarongwa yekutengesa kufona seyakaitika musangano musangano kuti utore chikamu. Ose odhiyo uye vhidhiyo (senge screen share, mharidzo, uye mademo) zvakanyorwa
Iyo Nhoroondo yeemail uye Email Dhizaini
Chipiri, May 9, 2017 China, May 11, 2017 Douglas Karr
Makore makumi mana apfuura, Raymond Tomlinson aishanda paARPANET (mutungamiriri weHurumende yeUS kuInternet inowanikwa paruzhinji), uye akagadzira email. Chaive chinhu chakakura kwazvo nekuti kusvika panguva iyoyo, mameseji aigona kungotumirwa nekuverengwa pakomputa imwechete. Izvi zvakatendera mushandisi uye kwekuenda kwakaparadzaniswa neiyo & chiratidzo. Paakaratidza waaishanda naye Jerry Burchfiel, mhinduro yaive: Usaudze chero munhu! Izvi hazvisiri izvo zvatinofanirwa kunge tichishanda